Warshadda Xirfadleyda Shiinaha ee Shiinaha SAE J1772 Heerka 2 Beddelka Kaydka EV Soo -saare Warshadaha iyo Warshadda | Farsamada Wadajirka ah
Warshadda Xirfadlaha ee Shiinaha SAE J1772 Heerka 2 Beddelka Kaydka EV Wareejiye
Warshadda Xirfadleyda ee Shiinaha EV Charger, Alaabta Korantada, Magaca Shirkadda, had iyo jeer waxay ku saabsan tahay tayada aasaaska shirkadda, raadinta horumarka iyada oo loo marayo aaminaad heer sare ah, u hoggaansanaanta heerka maaraynta tayada ISO si adag, u abuurista shirkad heer sare ah xagga ruuxa horumarka- calaamadinaya daacadnimo iyo yididiilo.
Waxaan sidoo kale soo bandhignaa badeecad ama adeeg soo -saaris iyo isku -darka badeecadaha iyo adeegyada. Waxaan leenahay xarunta wax -soo -saarka ee aan haysanno iyo meesha shaqada laga helo. Waxaan si sahal ah kuugu siin karnaa ku dhawaad ​​nooc kasta oo badeecad ama adeeg ah oo ku xiran alaabteena kala duwan ee Warshadda Xirfadleyda ee Shiinaha SAE J1772 Heerka 2 Beddelka Kaydka EV Bedel, “Beddel si loo hagaajiyo!” waa halku -dhiggeenna, oo macnihiisu yahay “Adduun ka wanaagsan ayaa na hor yaal, ee aan ku raaxaysanno!” Isbeddel u roon!
JNT-EVC10 saldhigyada korantada ee korontada waxaa lagu dhisay akhristayaasha kaarka RFID si loo aqoonsado adeegsadaha. Iyada oo leh naqshad ergonomic ah oo isku -dhafan, waxaa lagu dhejin karaa darbi ama lugeed iyadoo la bixinayo hadda lacag -bixinno kala duwan. JNT-EVC10 waxay kuu oggolaaneysaa inaad si sahal ah ugu darto ku dallacidda baabuurka korontada sidii dheef dheeraad ah oo loogu talagalay martigelinta, xafiisyada, degmooyinka, iyo guryaha kale ee ganacsiga badan.
Shabakad diyaarsan oo diyaarsan (LAN, 4G, ama Wi-Fi) si loogu xiro software maaraynta OCPP ee dhinac saddexaad leh.
Qalabaynta dhejinta darbiga ama keligiis ee ka shaqeeya awoodda wareeggaaga si loo yareeyo kharashyada rakibidda.
Xaqiijinta xaqiijinta RFID waxay u oggolaaneysaa marin u helidda darawalada EV.
Fiilada SAE J1772 ™ ee la jaan qaadi karta inta badan korontada iyo baabuurta korontada ku shaqeeya.
4.3 ″ LCD si loo muujiyo dhammaan xogta gaariga ee saldhigga lacag -bixinta inta lagu guda jiro lacag -bixinta. Way arki kartaa xaaladda lacag -bixinta, oo ay ku jiraan hadda, danab iyo heer -kulka. Muraayaduhu waxay ku habboon yihiin sanduuqa markaa ha ka welwelin shaashadda oo soo dhacday. Fiilada 18ft ama 25ft waxay ka tagaysaa meel ku filan inta u dhaxaysa baabuurka iyo saldhigga lacag -bixinta.
Saldhiggu wuxuu leeyahay heer koronto oo dheellitiran saldhigga marka aaladda korontada badan shaqeyneyso.
Markaa idaacaddu waxay ku shaqayn kartaa koronto joogto ah, iyadoo laga fogaanayo nasashada iyo khataraha kale ee nabadgelyo ee ay sababtay xasilooni darrada hadda jirta.
Dhammaan badeecadahayagu waa ETL/CE, tayada ayaa la aamini karaa. Baabuurkayaga EV wuxuu la jaan qaadayaa inta badan baabuurta korontada ee u hoggaansan heerka SAEJ1772.
Hore: 7kw EV Charger Cable Charging Rehold with TUV Ce RoHS
Xiga: 11.5kw AC EV Charger Commercial Version Electric Car Charging Solar EV Station
Kaydinta Saldhigga Ragga
Saldhigga Kaydinta Basaska Shiinaha
Soo-saaraha Shiinaha ee Darbiga-ku-rakibay Kharajka Baabuurka EV
Kaydka Baabuurka Korontada
Saddex Wajahadda Wejiga
IEC 62196-2 11kw EV Recharge Stations Stations EV ...
Bixinta OEM Ganacsiga Baabuurka Korontada ee Ganacsiga ...
Heerka 2, 240 volt baabuurka korontada (EV) chargin ...
SAE J1772 Shiinaha-saaraha Wall-dhajinta EV Ca ...
Heerka 2 Qaybta Bixiyaha EV oo leh Nooca 1 Meesha 16A ...